လက်ရှိ ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း ရဲ့ မတော်လိုက်ရတဲ့ ချစ်သူအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ အိမ့်ချစ် – Let Pan Daily
လက်ရှိ ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း ရဲ့ မတော်လိုက်ရတဲ့ ချစ်သူအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ အိမ့်ချစ်
သရုပ်ဆောင် ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်းကတော့ လက်ရှိ ပရိသတ်တွေကြားမှာ စိတ်ဝင်စားခံနေရတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပါပဲ။ သတင်းမီဒီယာ မဟုတ်တဲ့ ပေ့ခ်ျတစ်ခု ကနေပြီး ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း ရဲ့ အင်တာဗျူး ဗီဒီယိုတွေကို စုစည်းပြီး ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း ရဲ့ချစ်သူဟာ ဆရာဝန်လား? စစ်ဗိုလ်လား? ဘောလုံးဥက္ကဌလား? ဆိုပြီးတော့ ဝေဖန်မှုတွေက မြင့်တက်နလျက်ရှိပါတယ်။ ထိုအကြောင်းအရာနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အဆိုတော် အိမ့်ချစ်က ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်းအကြောင်းရေးသားထားတဲ့ ပို့စ်အောက်မှာ အခုလိုပဲ ထောက်ခံပြောဆိုလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
“သူနဲ့က အရင်မြေနီကုန်းမှာ အပေါ်ထပ် အောက်ထပ် နေခဲ့တာပါ။ သူတို့က တကယ်လည်း ချမ်းသာတယ်။ သူက အရမ်းအရှက်အကြောက်ကြီးတာ။ သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ အဲ့သူပြောတဲ့ အစ်ကိုကြီးက Construction တစ်ခုရဲ့သား အရမ်းချမ်းသာတာ။ စစ်ဆရာဝန်ပေါ့။ တပ်ကထွက်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်တာ တကယ်လည်း ဘောလုံး အသင်းပိုင်တယ်။ အဲ့အစ်ကို မိသားစုက သူနဲ့ သဘောတူထားတာ အကုန်အမှန်တွေ။ သူကမပြောတတ်တော့ အကုန် တလွဲတွေဖြစ်ကုန်တာ” ဆိုပြီး အကြောင်းသိတဲ့ အိမ့်ချစ်က ရှင်းပြပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ့်ချစ် ကတော့ ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်းရဲ့ အကြောင်းသိသူ တစ်ယောက်ပီပီ ပရိသတ်တွေ ဆက်လက် အထင် လွဲမှားခြင်းမရှိအောင် ပြောပြပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း အခုလောက်ဆို ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို နားလည်သဘောပေါက်သွားလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြပါစေလို့ ဆုတောင်း လိုက်ပါတယ်နော်။
Source: Thet Naing Aung’s fb
လကျရှိ ပရိသတျတှေ စိတျဝငျစားနကွေတဲ့ ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျး ရဲ့ မတျောလိုကျရတဲ့ ခဈြသူအကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ အိမျ့ခဈြ
သရုပျဆောငျ ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျးကတော့ လကျရှိ ပရိသတျတှကွေားမှာ စိတျဝငျစားခံနရေတဲ့ အနုပညာရှငျ တဈယောကျပါပဲ။ သတငျးမီဒီယာ မဟုတျတဲ့ ပခြေျ့တဈခု ကနပွေီး ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျး ရဲ့ အငျတာဗြူး ဗီဒီယိုတှကေို စုစညျးပွီး ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျး ရဲ့ခဈြသူဟာ ဆရာဝနျလား? စဈဗိုလျလား? ဘောလုံးဥက်ကဌလား? ဆိုပွီးတော့ ဝဖေနျမှုတှကေ မွငျ့တကျနလကျြရှိပါတယျ။ ထိုအကွောငျးအရာနဲ့ ပကျသတျပွီး အဆိုတျော အိမျ့ခဈြက ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျးအကွောငျးရေးသားထားတဲ့ ပို့ဈအောကျမှာ အခုလိုပဲ ထောကျခံပွောဆိုလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။
“သူနဲ့က အရငျမွနေီကုနျးမှာ အပျေါထပျ အောကျထပျ နခေဲ့တာပါ။ သူတို့က တကယျလညျး ခမျြးသာတယျ။ သူက အရမျးအရှကျအကွောကျကွီးတာ။ သူ့ကိုကွိုကျတဲ့ အဲ့သူပွောတဲ့ အဈကိုကွီးက Construction တဈခုရဲ့သား အရမျးခမျြးသာတာ။ စဈဆရာဝနျပေါ့။ တပျကထှကျပွီး ဆောကျလုပျရေး လုပျတာ တကယျလညျး ဘောလုံး အသငျးပိုငျတယျ။ အဲ့အဈကို မိသားစုက သူနဲ့ သဘောတူထားတာ အကုနျအမှနျတှေ။ သူကမပွောတတျတော့ အကုနျ တလှဲတှဖွေဈကုနျတာ” ဆိုပွီး အကွောငျးသိတဲ့ အိမျ့ခဈြက ရှငျးပွပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အိမျ့ခဈြ ကတော့ ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျးရဲ့ အကွောငျးသိသူ တဈယောကျပီပီ ပရိသတျတှေ ဆကျလကျ အထငျ လှဲမှားခွငျးမရှိအောငျ ပွောပွပေးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး အခုလောကျဆို ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျး ရဲ့ ဖွဈရပျမှနျကို နားလညျသဘောပေါကျသှားလောကျပွီ ထငျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျ ကွပါစလေို့ ဆုတောငျး လိုကျပါတယျနျော။
ကလေးလေး တစ်ယောက်လို လွတ်လပ်ပေါ့ပါးနေပြီး ချစ်စရာ အမူအရာလေးတွေ နဲ့ အသည်းယားကောင်းနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးကြောင့် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှတရားလေး ပေါ်လွင်နေပြီး အမိုက်စားပိုစ့်လေးတွေပေးနေ ခဲ့တဲ့ “နန်းမွေစံ”
ပုရိသ အပေါငျးကို ရငျကို မယိုမရှဖွဈအောငျ ဘဈကနီ နဲ့ အရမျးကို လနျးလှနျးနတေဲ့ ပုံတှေ တငျပေးလိုကျတဲ့ နနျးမှစေံ
တျောရုံလုပျရနျမလှယျကူတဲ့ အရာလေးကို ပြော့ပြော့ပွောငျးပွောငျး နဲ့ အလှယျတကူလုပျပွလိုကျတဲ့ နှယျနှယျထှနျး ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ